Amaxwebhu kaGoogle ngoku anokufunda iifayile ze-dxf -Geofumadas
Ikhaya/Apple - Mac/I-Google Docs ngoku ingafunda iifayile ze-dxf
Apple - MacAutoCAD-AutoDeskezintshaInternet kunye neBlogs
Kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo uGoogle wandise uluhlu lwenkxaso yefayile kuGoogle Amaxwebhu. Ngaphambili, ubungenakho ukubona iifayile zeOfisi ezinjengeLizwi, i-Excel, kunye nePowerPoint.
Ngelixa ifundwa kuphela, uGoogle ubonakalisa ukunyanzelisa kwakhe ekunikezeleni i-Chrome amandla enkqubo yokusebenza kwilifu. Ezi zinto ziya kulindeleka ukuba zongeze kumandla okujonga iifayile kwi-Intanethi ngaphandle kokuzifaka kuGoogle Amaxwebhu. Siyayibona indlela esijongise ngayo kwimikhwa ephezulu yemfuno, ezinje ngeOfisi kunye neAdobe, kodwa nakwizinto ezinokubakho kwixesha elizayo ezinje ngenkxaso yefayile ka-Apple.
Kwakungekho sifanele sivuywe kakhulu, ngokukhawuleza nje xa sibona iifayile zefayile, indlela, susa, thumela attachment okanye wabelane nabanye. Kodwa basebenza ngeendlela zokukhangela ngaphakathi koxwebhu, inkxaso yenkxaso; Ngokuqinisekileyo, asilindeli ukuhlela.
Kuzo zonke iifom ze-12 ezongeziweyo okanye eziphuculweyo, nangona ezinye zezi zinto sele zisekelwe, iGoogle ifake amandla amakhulu okubonakalisa nokubonisa i-intanethi.
.xls kunye .xlsx (Excel)
.doc kunye .doc (iZwi) kunye .pages ze-Apple
.i (Adobe Illustrator)
.svg (iValable Vector Graphics)
.eps kunye .ps (PostScript)
.xps (i-XML Paper Specification)
Zibonakala ngathi ngamanyathelo abalulekileyo kum, imeko ye-dxf kukutsiba nje okusisiseko. Kodwa akukho kwimeko yeefayile zoyilo lwegraphic.